यस्तो यन्त्र, एक माइक्रोस्कोप जस्तै पहिले र आधुनिक संसारमा धेरै लोकप्रिय छ। स्कूल दिन हामीलाई प्रत्येक यो सयौं वा पटक पनि हजारौं विषयमा enlarges एउटा अप्टिकल उपकरण छ कि सम्झना। जीव वर्ग हामी प्याज फिलिम को कक्षहरू मा आइपिस मार्फत देख्यो र छली र यस्तो उपकरणको जटिलता छक्क परे। आज, हामी अझै यो प्रश्नको सही जवाफ भएकोले माइक्रोस्कोप आविष्कार गर्ने बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
पहिलो माइक्रोस्कोप कसरी
बाङ्गो सतह अप्टिकल गुण 300 वर्ष ई.पू. भेट्टाएका थिए। आफ्नो ग्रंथ मा युक्लिड को अपवर्तन र व्याख्या, अनुसन्धान बताउनुभयो , प्रकाश को प्रतिबिम्ब वृद्धि परिणामस्वरूप देखा दृश्य वस्तुहरु। को "ओप्टिक्स" मा टोलेमी ज्वलनशील ग्लास को विशेषताहरु वर्णन गर्न। तर, जबकि यी सबै गुण प्रयोग गरेका थिए। र केवल केही शताब्दीपछि तिनीहरूले व्यवहार मा प्रयोग गरिन्छ। हंस Janssen र आफ्नो छोरा Zacharias 1550 मा निर्माण, उपकरण को पहिलो मोडेल: एक ट्यूब मा दुई लेंस, यसरी वृद्धि पचास पटक प्राप्त राख्नुभयो। यो एक आदिम माइक्रोस्कोप आविष्कार गर्ने को प्रश्नको जवाफ मध्ये एक छ। 1610 मा एक ग्यालिलियोले धक्का, कि फेला , दूरबीन पनि सानो वस्तुहरु बढाउन सक्छ तिनीहरूले आविष्कार। यो विद्वान थियो र सकारात्मक र नकारात्मक लेंस को निर्वाचकगण, पहिलो माइक्रोस्कोप आविष्कार गर्ने रूपमा मानिन्छ थियो। त्यस मिति पछि, यस क्षेत्रमा अनुसन्धान तीव्र गतिमा बढ्न थाले।
17 औं सताब्दी - ठूलो आविष्कारहरू समय
जीव, चिकित्सा, भौतिक, गणित: यो शताब्दीमा त्यहाँ अधिकांश आधुनिक विज्ञान जग बनेको एक वास्तविक प्राविधिक क्रान्तिको थियो। महान् आविष्कारहरू र ठूलो आविष्कार गरेका थिए। भर्खरै समय सूक्ष्मदर्शी मा एकदम सुधार र हरेक शोधकर्ता को एक महत्वपूर्ण भाग भएका छन्। तर पछि कुनै एक साँच्चै उसलाई निर्माता विचार गर्ने माइक्रोस्कोप, आविष्कार गर्ने भन्न भएन। एक दृश्य अनुसार, रिपोर्टिङ एकाइ को निर्माता को रूपमा यन्त्र वर्णन 1646 मा ए Kircher छ "एक फ्लिया ग्लास।" यो कस्तो समावेश गर्दैन? यो एक आवर्धक ग्लास, चरण आयोजित जो तामा को आधार मा तय भएको थियो। तल राखिएको थियो समतल दर्पण प्रकाश प्रतिबिम्बित र विषय उजाला गर्न। को स्क्रू को माध्यम द्वारा सारियो र म्याग्निफाइङ्ग ग्लास प्रतिमा स्थापित गर्न सकिन्छ। यो उपकरण आधुनिक प्रकाश माइक्रोस्कोपी को प्रोटोटाइप भयो।
सी Huygens आइपिस प्रणाली र उपकरण को थप विकास
यस प्रणालीको स्थापना सूक्ष्मदर्शी को विकास मा एक ठूलो चरण थियो। यो विषय स्पष्टता वृद्धि गर्न अनुमति एक बेरंग छवि दिन सम्भव थियो। प्रारम्भिक 17 औं सताब्दी मा K. Drebel वैज्ञानिक, एक मिश्रित माइक्रोस्कोप गरे दुई लेंस को निर्वाचकगण: पहिलो विषय, दोस्रो सम्बोधन - को शोधकर्ता को आँखा गर्न। यस मामला मा, पहिलो एक उल्टो बढेको छवि दिने, ग्लास biconvex प्रयोग गर्न। रबर्ट Guk 1661 मा अर्को लेन्स थप्दा, यन्त्र सिद्ध। यो प्रकार 18 औं सताब्दी को मध्य गर्न सूक्ष्मदर्शी को सबै भन्दा लोकप्रिय र सबै भन्दा मोडेल भयो। अर्को आविष्कारक - Antoni वैन Leeuwenhoek - पनि माइक्रोस्कोप आविष्कार गर्नेहरूलाई छलफल। कारण - रिपोर्टिङ एकाइ को विकास गर्न आफ्नो भारी योगदान। आफ्नो खाली समय मा, त्यो लेंस पलिश। को 350-400 समयमा - तिनीहरूले अपेक्षाकृत साना थिए भन्ने तथ्यलाई बाबजुद हडताली मा वृद्धि दिइएको।
जीवाणुतत्व माइक्रोस्कोप मा प्रभाव
आफ्नो लेंस प्रयोग Leeuwenhoek आफ्नै उपकरण सिर्जना र वस्तुहरु को एक किसिम अध्ययन गर्न थाले। त्यसैले, एउटा मात्र सानो गोलाकार लेन्स पछि उहाँले फोहोर पानी एक थोपा प्राणीहरू जीवित सानो आकार को एक भीड देखे। यसलाई त्यहाँ सूक्ष्म जीवन केही दयालु हुन्छ कि अन्तमा थियो। जीवाणुतत्व - Leeuwenhoek अप अर्को नयाँ विज्ञान को शुरुवात चिन्ह लगाइएको जो आफ्नो अध्ययन, लिए। 1861 मा, वैज्ञानिक रयल समाज को आफ्नो खोज प्रस्तुत र माइक्रोस्कोप को आविष्कारक को शीर्षक र सबैभन्दा ठूलो अन्वेषक पाए। यो त्यो बाहिर जान्छ - यो माइक्रोस्कोप आविष्कार गर्ने एक। अब वर्णन उपकरणहरू द्वारा ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ। छवि र इलेक्ट्रन प्रवाह र कहिले काँही एक लेजर उत्पादन हल्का प्रयोग नगर्नुहोस् मोडेल त्यहाँ। यो गर्न, प्रयोग र कम्प्युटर गणना। को माइक्रोस्कोप प्राकृतिक विज्ञान मा अनुसन्धान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन को एक भएको छ, यो रसायन र जीव, र भौतिक मा प्रयोग गरिन्छ।
तपाईं इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप आविष्कार गर्ने बारेमा आश्चर्य भने, सही उत्तर हुनेछ: विश्वविद्यालय शेफील्ड को को भौतिकशास्त्र। प्रसारण माइक्रोस्कोपी को विधि, इलेक्ट्रॉन को तरङलम्बाइ द्वारा मात्र सीमित तस्बिरहरू को संकल्प प्राप्त गर्न सक्षम - पुरानो उपकरणको हृदय मा। प्रसारण उपकरण को डिजाइन, अनुसन्धानकर्ताहरूले तिनीहरूले सामान्यतया कम र संकल्प भएकोले चुम्बकीय लेंस त्यागेर। नमूना मार्फत छालहरू को diffraction पारित, र छविको कम्प्युटर विश्लेषण गरेर। यो इलेक्ट्रोनिक ptychography छ। एउटा सानो डिजाइन परिमार्जन र अन्तिम छवि गठन गर्ने केही अन्य तरिकामा प्रयोग गरेर वैज्ञानिकहरूले अवस्थित उपकरणमा संकल्प पाँच पटक वृद्धि गर्न सक्षम थिए।
एक इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप को कार्य सिद्धान्त
अब यो पहिलो माइक्रोस्कोप आविष्कार गर्ने त महत्त्वपूर्ण छ। अब शो पूर्ण बिभिन्न, इलेक्ट्रोनिक सहित धेरै शक्तिशाली उपकरणहरू चलिरहेको। काम को सिद्धान्त अनुसार प्रकाश गर्न समान छन्। मात्र तिनीहरूलाई सट्टा मा प्रकाश प्रवाह नमूना परीक्षण इलेक्ट्रॉनों मार्फत र चुम्बक ग्लास लेंस को सट्टा प्रयोग गरिन्छ। तर यो कारण चुम्बकीय लेंस मा निहित aberrations गर्न गइरहेको छ। वैज्ञानिकहरूले छवि पुनर्स्थापना तरिका पाएका छन्। यो क्षेत्रीय हटाइएको को चुम्बक विकृति अनुमति र तदनुसार।
जो प्रकाश माइक्रोस्कोप आविष्कार? एक सानो इतिहास
एक अप्टिकल माइक्रोस्कोप के हो? यो प्रयोगशाला प्रणाली अध्ययन, समीक्षा र व्यावहारिक आवेदन उद्देश्य लागि बढेको दृश्य मा सानो वस्तुहरु को तस्बिरहरू उत्पादन डिजाइन। हामी माइक्रोस्कोप को विकास को इतिहास हाम्रो लेख थाले, तर अब अन्य पक्ष बाट मुद्दा हेर्न। हाल यस्तो उपकरण मात्र होइन डाक्टर र जीवशास्त्रीहरूको आवश्यक छ। यो असम्भव छ बिना विधानसभा र उत्पादनहरूको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न हालको आवश्यकताहरु संग आधुनिक उच्च प्रविधिहरू कल्पना गर्न।
एक उपलब्धि बारे हामीलाई भन्नुहोस्। भारी कर्तव्य अप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो तपाईं वस्तुहरु 10 एनएम को आकार supermalenkogo अन्वेषण र पनि 3D-छविको उच्चतम गुणस्तर प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ - 2006 मा, जर्मन वैज्ञानिकहरूले Mariano Bossi र Stefan नरक nanoscope विकास गरे।
आधुनिक उपकरणहरू को संभावनाहरु बारेमा छोटकरीमा
हामी एक सानो पहिलो माइक्रोस्कोप आविष्कार गर्ने को प्रश्न बुझे छन्। अब, आधुनिक उपकरणहरूको संभावनाहरु बारेमा शब्दहरू बस एक जोडी। 2010 मा, एक Israeli Yeshiva विश्वविद्यालय, वैज्ञानिकहरू अणु सेल भित्र सार्न कसरी व्यक्तिगत पालन गर्न सक्षम थिए भन्ने समाचार आयो। एकै समयमा जर्मन अनुसन्धानकर्ताहरूले रासायनिक प्रतिक्रिया को पाठ्यक्रम मा आणविक परिवर्तन कब्जा गरेको छ। र Kharkov पीटीआई सुरुमा एक वर्ष एक व्यक्ति अणु को स्पष्ट चित्र पायो। पनि यो हाल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी आफ्नो इलेक्ट्रोनिक क्षमताहरु मा पक्रने छन् उल्लेख गर्नुपर्छ।
एक केंद्रीकृत राज्य को गठन मा संसद र यसको भूमिका निर्वाचित
बर्नाउल को इतिहास
महिमा को आदेश: सिपाहीहरूले पुरस्कार को कथा
Georgy Zhukov। मार्शल Zhukov जी K. महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध: Zhukov
गृह लागि crochet - स्टाइलिश शौक
कसरी आफ्नो हात संग बालुवा नष्ट गर्न?
मर्सिडीज डब्ल्यू292- 2016 को लामो-अवकाशित नवीनता को बारे मा सबै भन्दा दिलचस्प छ
Bunin कथा "सैन देखि सज्जन": नैतिकता समस्या
सोची या मा निर्माण Olimpiyskiyh सुविधाहरु "को ओलम्पिक पछि जीवन, छन्"
चुरोट "Rothmans" - एक किफायती मूल्य मा अंग्रेजी गुणस्तर
परम्परा र गुणस्तर को प्रशंसक लागि फ्रान्स ले ब्रांडीको - "Courvoisier"